Akụkọ - inghọrọ Ngwá Ọrụ Kachasị Mma na forzọ maka Ngwa Nkwakọ ngwaahịa
Họrọ ihe kachasị mma na ụzọ maka igwe eji akwakọ ngwaahịa
Mgbe ị na-achọ igwe nkwakọ ngwaahịa, naanị ndị kacha mma ga-eme. Igwe maka azụmahịa gị karịrị ego izizi. O nwere ike ime ma ọ bụ mebie ọdịnihu nke ụlọ ọrụ gị. Yabụ ịchọrọ ịhọrọ igwe nkwakọ ngwaahịa nke akụrụngwa kachasị mma. Ma ị nwere mmasị ịkwalite igwe oge ochie ma ọ bụ ịgbasa usoro mmepụta dị, jiri ntuziaka a nyere gị aka ịme nhọrọ ziri ezi na akụrụngwa. GAlọ ọrụ GAOGE nwere ike ịnye gị ọrụ dị elu ahaziri iche dịka ihe ị chọrọ si dị ma mee ka akụrụngwa dị mma
Igwe anaghị agba nchara ọtụtụ ndị na-eji na-eme igwe mmiri, gụnyere etiti, ngwaahịa na kọntaktị na-ebupụta, na ikpe nke ịdị ọcha igwe, dum mpempe akụrụngwa. A na-ahọrọ ihe a maka ịdịte aka na ike ya. Igwe anaghị agba nchara na-eritekwa uru akụrụngwa site na ụba corrosion- na oxidation eguzogide. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, nchara anaghị ata nchara dị ka ọla ndị ọzọ. Ọ na-egbochi nhicha dị elu, mmiri mmiri, uzuzu, iru mmiri, na ihe ndị ọzọ na-ewebata mmiri. Ọ bụ maka ebumnuche niile ndị bu ụzọ na mgbe ị na-ahọrọ ihe maka ihe eji arụ ọrụ igwe, igwe anaghị agba bụ nhọrọ kachasị elu n'ọtụtụ oge.
N'ihe banyere ịdọrọ eriri pulleys tinye n'ọrụ na igwe akụrụngwa, enwere otu igwe nke pụtara na igwe mmadụ. Aluminom dị ka ígwè bụ ihe dị mkpa maka ịdị arọ ya na ike dị ukwuu. Na mgbakwunye, ọ bụ metal na-enweghị atụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe nke nwere mmekọrịta enyi na enyi, n'ihi ụba ya na ala ụwa, aluminom nwere ike ịbụ nke a na-agaghị echefu echefu.
Mgbe aluminom na anodized maka igwe ihe nkwakọ ngwaahịa, ike ya na-abawanye nke ukwuu. Dabere na Council nke Aluminom Anodizers, "ebumnuche nke anodizing bụ ị mepụta oyi akwa aluminom nke ga-echebe aluminom dị n'okpuru ya. The aluminum oxide oyi akwa nwere nnọọ elu corrosion na abrasion eguzogide karịa aluminum. ” N'ihi nke a, anodized aluminom dị mma mgbe ejiri ya na-ewepu ihe na-emepụta belt. Na nchikota, pulleys sitere anodized aluminom ga-akawanye njọ karịa nwayọ nke sitere na ihe ndị ọzọ dị ka plastik.
Mfe akụkụ nke Parts
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji hụ na igwe eji akwakọ ngwaahịa ga-adịgide bụ site na ime ka akụkụ ya dị mfe ma hụ na ha dị n'ụdị na ha anaghị arụ ọrụ. N'adịghị ka nkwenye ụfọdụ a na-ewu ewu mgbe ụfọdụ, mgbe a bịara n'ihe akụrụngwa, ọ dịkarịrị mfe mgbe niile. Dika akuru otutu uzo na ihe mgbagwoju anya n'ime igwe, nke a na eme ka ohere nke obere okwu di uku mgbe nsogbu bilitere. Ọzọkwa, site na ịhọrọ ihe ndị siri ike dịka aluminom na ígwè maka akụkụ, akụrụngwa igwe ga-achọ dochie obere oge.
Ugbu a ị matara ihe ị ga-achọ maka igwe nkwakọ ngwaahịa, ị dịla njikere ịmalite ịzụ ahịa maka ngwa ọrụ ọzọ gị. Chọọ na ebe nrụọrụ weebụ anyị iji chọpụta ihe anyị nwere inye maka usoro nhazi, nke dị mfe, na nke na-adịgide adịgide. Kpọtụrụ anyị ka anyị tinye ndụmọdụ ma ọ bụ ịmatakwu banyere ihe ndị kachasị mma ị ga-achọ maka igwe nkwakọ ngwaahịa.